Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Niverina tany amin'ny faritra mavo i Italia tamin'ny 26 aprily
Niverina tany amin'ny faritra mavo i Italia hoy ny PM
Ny praiminisitra italiana Mario Draghi sy ny minisitry ny fahasalamana Roberto Speranza dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Hall Multifunctional an'ny praiminisitra nanambara ny fiverenany any amin'ny faritra mavo.
Miorina amin'ny paikadin'ny toe-pahasalamana tsara kokoa sy amin'ny fihenan'ny fihenan'ny areti-mifindra sy ny fanafainganana ny fampielezana vaksiny dia nanambara ny PM ny fiverenana any amin'ny faritra Yellow.
Amin'ity ambaratonga ity dia hisokatra indray ny sekoly ary ny hetsika any ivelany no hifantohana.
Ny drafitra fanarenana sy faharetana nasionaly no ho vato ifaharana amin'ny famoahana indray miaraka amin'i Italia manana 191.5 miliara euro azo alaina.
Ny PM Draghi dia nanoritsoritra ireo andry telo amin'ny paikady famerenana handefa indray ny firenena: sarintany mazava momba ny fisokafana indray, fepetra hanohanana ny toekarena sy ny orinasa, ary ny fandefasana indray ny fitomboana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola.
Ity fanokafana ity dia mifototra amin'ny paikadin'ny toe-pahasalamana tsara kokoa, miaraka amin'ny fihenan'ny fihenan'ny areti-mifindra sy ny fanafainganana ny hetsika fanaovana vaksiny. "Afaka mijery ny ho avy isika amin'ny fanantenana feno fahendrena sy fahatokisana," hoy ny fanazavany Dragons.